တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ချစ်ကြည်ရေးခရီးထွက်ခွာ » ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်
ဇွန် ၂၄၊ ၂၀၁၈
နေပြည်တော်၊ ဇွန် – ၂၄
ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Tarnchaiyan Srisuwan၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ)ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှတပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Jukr Boon-Long၊ ထိုင်းဘုရင့်ရေတပ်စစ်သံမှူး၊ လေတပ်စစ်သံမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများကလေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှနှင့် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်လိုက်ပါသွားကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဒွန်မောင်းတပ်မတော်လေဆိပ် (Wing-6) သို့ရောက်ရှိရာ ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ပူးတွဲစစ်ဦးစီးချုပ် Gen. Ponpipaat Benyasri နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ မြန်မာ စစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆို နှုတ်ဆက်ကြသည်။
အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နယ်ဘက်စစ်ဘက် ခေါင်းဆောင်များနှင့် သီးခြားစီတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပြီး အထင်ကရနေရာများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု လေ့လာသွားမည်ဖြစ်သည်။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့ ထိုငျးနိုငျငံသို့ခဈြကွညျရေးခရီးထှကျခှာ
နပွေညျတျော၊ ဇှနျ – ၂၄
ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ Gen. Tarnchaiyan Srisuwan၏ ဖိတျကွားခကျြအရ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျ ဗိုလျခြုပျမှူးကွီး မငျးအောငျလှိုငျ ဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျော ခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ ယနမှေ့နျးလှဲပိုငျးတှငျ ရနျကုနျအပွညျပွညျဆိုငျရာ လဆေိပျမှ ထှကျခှာကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောခဈြကွညျရေးကိုယျစားလှယျအဖှဲ့အား ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျ(ရေ)ဗိုလျခြုပျကွီးတငျအောငျစနျး၊ ကာကှယျရေး ဦးစီးခြုပျရုံး (ကွညျး) မှတပျမတျောအရာရှိကွီးမြား၊ ရနျကုနျတိုငျးစဈဌာနခြုပျတိုငျးမှူး၊ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ထိုငျးနိုငျငံ သံအမတျကွီးH.E. Mr. Jukr Boon-Long၊ ထိုငျးဘုရငျ့ရတေပျစဈသံမှူး၊ လတေပျစဈသံမှူးနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားကလဆေိပျတှငျ ပို့ဆောငျနှုတျဆကျကွသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျဦးဆောငျသညျ့ မွနျမာ့တပျမတျောကိုယျစားလှယျ အဖှဲ့တှငျ အဖှဲ့ဝငျမြားအဖွဈ ဇနီးဒျေါကွူကွူလှနှငျ့ ကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျရုံးမှ တပျမတျောအရာရှိကွီးမြား အဖှဲ့ဝငျအဖွဈလိုကျပါသှားကွသညျ။
ထို့နောကျ တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျနှငျ့အဖှဲ့ဝငျမြားသညျ ထိုငျးနိုငျငံ၊ ဘနျကောကျမွို့ရှိ ဒှနျမောငျးတပျမတျောလဆေိပျ (Wing-6) သို့ရောကျရှိရာ ထိုငျးဘုရငျ့ တပျမတျောပူးတှဲစဈဦးစီးခြုပျ Gen. Ponpipaat Benyasri နှငျ့ဇနီး၊ ထိုငျးဘုရငျ့တပျမတျော အရာရှိကွီးမြား၊ ထိုငျးနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာနိုငျငံသံအမတျကွီး ဦးမြိုးမွငျ့သနျး၊ မွနျမာ စဈသံ(ကွညျး၊ရေ၊လေ) ဗိုလျမှူးခြုပျ ခငျဇျောနှငျ့ တာဝနျရှိသူမြားက လဆေိပျတှငျကွိုဆို နှုတျဆကျကွသညျ။
အဆိုပါခရီးစဉျအတှငျး တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြုပျသညျ ထိုငျးနိုငျငံရှိ နယျဘကျစဈဘကျ ခေါငျးဆောငျမြားနှငျ့ သီးခွားစီတှဆေုံ့၍ နှဈနိုငျငံခဈြကွညျရေးနှငျ့ ပူးပေါငျးဆောငျရှကျရေးဆိုငျရာကိစ်စရပျမြားအား ဆှေးနှေးခွငျးမြားဆောငျရှကျပွီး အထငျကရနရောမြားအား လှညျ့လညျကွညျ့ရှု လလေ့ာသှားမညျဖွဈသညျ။